ပခုက္ကူမြို့တွင် ခဲမိုးရွားသည့်ပုံစံဖြင့် ပုဏ္ဏကတိုက် - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ပခုက္ကူမြို့တွင် ခဲမိုးရွားသည့်ပုံစံဖြင့် ပုဏ္ဏကတိုက်
ပခုက္ကူမြို့တွင် ခဲမိုးရွားသည့်ပုံစံဖြင့် ပုဏ္ဏကတိုက်
Apann Pyay 3:59 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ပခုက္ကူ စက်မှုဇုန် သတင်း ပုဏ္ဏက တိုက်တာပါ။ နေလဝန်း ကဖေးနဲ့ အအေးဆိုင်တဲ့။ ၃-၅-၂၀၁၇ ည ၈ နာရီကစ၍ ၄-၅-၂၀၁၇ အခုနေ့လည် ၁း၁၀ မိနစ်အထိ ပုဏ္ဏက ခဲနဲ့တိုက်တာပါ။ ညပိုင်းကတော့ တော်တော်ကြမ်းတယ်။ နေခင်းပိုင်းတော့ အားပျော့လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခဲကျနေတုန်း အခုအချိန်အထိပါပဲ။ ညပိုင်းက တာဝန်ရှိ ရဲအရာရှိများနဲ့အတူ စက်မှုဇုန်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံ ဦးကျော်ဆန်းလည်း တစ်ညလုံး အိမ်ရှင်ကို အားပေး အားဖြည့် ဝိုင်းဝန်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြပြီး မနက်မိုးလင်း ၇ နာရီလောက်မှာ အားလုံး လက်လျှော့ခဲ့ပါတယ်။ ခဲနဲ့ထုတဲ့ တရားခံကို ဆက်တိုက်ရှာဖွေတာ မရရှိတော့ပါ။ သက်ကြီး ဘိုးဘွားတွေကို ဖြစ်စဉ်လေး ပြောပြတော့ "ဟာ တရားခံမရှာနဲ့တော့။ အဲဒါ ပုဏ္ဏကတိုက်တာ"တဲ့ . . . ။ တစ်ညလုံး တာဝန်ကျရဲအရာရှိတွေလည်း တကယ်ကြိုးစားကြပါတယ်။ အခုအချိန်အထိလည်း ခဲမိုး မကြာမကြာ လာနေတုန်းပဲ။ ထူးတော့ ထူးစမ်းတယ်ဗျာ။ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါ။
TTL (Credit - မျိုးမင်းညွန့်)
ပခုက်ကူ စကျမှုဇုနျ သတငျး ပုဏ်ဏက တိုကျတာပါ။ နလေဝနျး ကဖေးနဲ့ အအေးဆိုငျတဲ့။ ၃-၅-၂၀၁၇ ည ၈ နာရီကစ၍ ၄-၅-၂၀၁၇ အခုနလေ့ညျ ၁း၁၀ မိနဈအထိ ပုဏ်ဏက ခဲနဲ့တိုကျတာပါ။ ညပိုငျးကတော့ တျောတျောကွမျးတယျ။ နခေငျးပိုငျးတော့ အားပြော့လာတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခဲကနြတေုနျး အခုအခြိနျအထိပါပဲ။ ညပိုငျးက တာဝနျရှိ ရဲအရာရှိမြားနဲ့အတူ စကျမှုဇုနျအုပျခြုပျရေးတာဝနျခံ ဦးကြျောဆနျးလညျး တဈညလုံး အိမျရှငျကို အားပေး အားဖွညျ့ ဝိုငျးဝနျး ကာကှယျစောငျ့ရှောကျကွပွီး မနကျမိုးလငျး ၇ နာရီလောကျမှာ အားလုံး လကျလြှော့ခဲ့ပါတယျ။ ခဲနဲ့ထုတဲ့ တရားခံကို ဆကျတိုကျရှာဖှတော မရရှိတော့ပါ။ သကျကွီး ဘိုးဘှားတှကေို ဖွဈစဉျလေး ပွောပွတော့ "ဟာ တရားခံမရှာနဲ့တော့။ အဲဒါ ပုဏ်ဏကတိုကျတာ"တဲ့ . . . ။ တဈညလုံး တာဝနျကရြဲအရာရှိတှလေညျး တကယျကွိုးစားကွပါတယျ။ အခုအခြိနျအထိလညျး ခဲမိုး မကွာမကွာ လာနတေုနျးပဲ။ ထူးတော့ ထူးစမျးတယျဗြာ။ တဈခါမှ မမွငျဖူးပါ။
TTL (Credit - မြိုးမငျးညှနျ့)